I-china 2835 ilayithi ekhokelwayo ekhanyisiweyo ekhokelwa ngabenzi bebhokisi yokukhanya kunye nabathengisi | Huayuemei
Iphaneli ekhokelwa ngasemva engama-2835 yebhokisi yokukhanyisa
3. Iphaneli ye-LED Umbala omnye we-injini ye-LED efanelekileyo yokufaka izicelo zokukhanyisa ukukhanya okanye izibane zangaphakathi zokukhanyisa. Umlinganiso wePaneli yethu ye-LED yi-300 * 300 mm kwaye inokudityaniswa kunye ukwenza umphezulu wokukhanya ongenamthungo.
4. IPhaneli ye-LED ilungele ukukhanyisa ukukhanya kwezinto ezisezantsi ngenxa yokubaluleka kokukhanya okuphezulu kwe-1 600 lm kwisitishi esimhlophe. Amaxabiso aphakamileyo akhanyayo enza ukuba injini ye-LED ilungele ulwakhiwo lwezicelo ezinje ngemiboniso yemyuziyam, iisethi zemidlalo yeqonga kunye neesinematographic, iindawo zokuzonwabisa kunye naphina apho ukukhanya kwe-RGBW kusebenza ngokuvelisa okuphezulu. Yenziwe etshayina.
Q1. Ndingayifumana isampulu yoku-oda kokukhanya okukhokelwayo?
I-A1: Ewe, samkela isampulu yoku-odola ukuvavanya kunye nokujonga umgangatho. Iisampuli ezixubileyo zamkelekile.
Umbuzo Kuthekani ixesha phambili?
I-A2: Isampulu idinga iintsuku eziyi-1-3, ixesha lokuvelisa ubuninzi lifuna iintsuku zomsebenzi ezi-5-7 zoku-odola ngaphantsi kwee-1000 iiPC.
Umbuzo. Ngaba unayo nayiphi na imida ye-MOQ yomyalelo wokukhanya okhokelwayo?
I-A3: I-MOQ ephantsi, i-1pc yokujonga isampulu iyafumaneka
Umbuzo Uzihambisa njani iimpahla kwaye kuthatha ixesha elingakanani ukufika?
I-A4: Sihlala sithumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT. Ihlala ithatha iintsuku ezingama-3-5 ukufika. Ukuhamba ngenqwelomoya kunye nolwandle kukhethwa ngokuzithandela.
Umbuzo 5. Ungaqhuba njani iodolo yokukhanya okukhokelwayo?
A5: Okokuqala sazise iimfuno zakho okanye isicelo.
Okwesithathu umthengi uqinisekisa iisampulu kunye neendawo zokufaka i-odolo ngokusemthethweni.
Q6. Ngaba kulungile ukuprinta ilogo yam kwimveliso ekhanyayo ekhokelwayo?
A6: Ewe. Nceda usazise ngokusesikweni phambi kwemveliso yethu kwaye uqinisekise uyilo kuqala ngokusekwe kwisampulu yethu.
I-Q7: Ngaba uyasinika isiqinisekiso seemveliso?
I-A7: Ewe, sinikezela iwaranti yeminyaka emi-3 kwiimveliso zethu.
I-Q8: Ngaba uyazamkela iinkonzo ze-OEM?
A8: Ewe, thina yingcali customizde njengoko izicelo zakho.
I-Q9: Ungajongana njani neziphene?
I-A9: Okokuqala, iimveliso zethu ziveliswa ngokungqongqo kwinkqubo yolawulo lomgangatho kwaye izinga elinesiphene liya kuba lincinci
Okwesibini, ngexesha lesiqinisekiso, siya kuthumela izibane ezintsha kunye nomyalelo omtsha wobungakanani obuncinci. Kuba
iimveliso zebhetshi ezineziphene, siya kuzilungisa kwaye sizithumele kuwe okanye sinokuthetha ngesisombululo i
Ukubandakanya ukuphinda ufowune ngokwemeko yokwenyani.
Egqithileyo Iphaneli ye-LED eqaqambileyo ye-2835
Okulandelayo: Imodyuli ekhokelwa ngasemva